Anisan’ny tena nampihetsi-po azy raha araka ny fanazavany ny fihetsiky ny kandida Marc Ravalomanana nandritra ny famoahana ny voka-pifidianana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny talata lasa teo izay nomarihiny manokana fa tena feno fanetren-tena tokoa sady mariky ny fanomezan-danja ny fihavanana Malagasy. Fihetsika tahaka ireny no tsy ampy teto amintsika hatramin’ny fotoana nahazoana ny fahaleovantena tamin’ny taona 1960 ka tokony hianaran’ny mpitondra rehetra. Ankoatra izay dia nanambara Rafanomezantsoa Jean Nirina fa miandrandra fampandrosoana tena izy amin’izay izy sy ny vahoaka Malagasy. Mino aho hoy izy fa tsy hisy filoham-pirenena hieritreritra hanao ratsy ny tanindrazany fa ireo manodidina azy matetika no tena ratsy. Inoako anefa fa olon’ny fanapahan-kevitra ny filoha vaovao ka hahay handray izany araka ny tokony ho izy ho tombontsoan’ny vahoaka Malagasy. Farany izay tsy kely akory dia nomarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina fa tokony hatsahatra manomboka eto ny fanenjehana olona fahatany, indrindra fa ny halako bika tsy tiako tarehy, hahafahana mametraka ny tany tan-dalàna.